पर्यटक ल्याउन/पठाउन कोरियाली दूतावासले सघाउने- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कोरियामा रहेका कामदारका आफन्तलाई त्यता पठाउन कोरियाली दूतावासले टुर प्याकेज बनाई पठाउन सघाउने
काठमाडौँ — नेपालमा कोरियाली पर्यटक बढाउन काठमाडौंस्थित कोरियन राजदूतावास र कोरिया टुर एण्ड ट्रेकिङ्ग अपरेटर्स एशोशिएसन(नेपाल)बीच समझदारी भएको छ ।
बिहीबार ठमेलमा आयोजित कार्यक्रममा नेपालका लागि कोरियाका राजदूत पार्क योङ सिक र एशोशिएसनका अध्यक्ष अमर बहादुर शाहीबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
एशोशिएसनका अनुसार, कोरियाली दूतावासले नेपाल सरकारले सन् २०२०का लागि तय गरेको नेपाल भम्रण वर्षलाई समेत मध्यनजर गर्दै आफ्ना मुलुकका नागरिकहरुको नेपालमा आवागमन बढाउन मद्दत गर्ने छ ।
उसले कोरियाली नागरिकहरुको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै एशोशिएसनलाई सघाउन भनेको छ । यसैबीच एशोशिएसनले नेपालका विभिन्न हिमाली भेग लगायतका पर्यटकीय क्षेत्रमा जाने कोरियाली पर्यटकहरुका लागि आपतकालीन अवस्थामा सेल्टरको व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
‘कुनै कोरियाली नागरिक विरामी परे वा खर्च अभाव लगायतका समस्यामा परे हामीले सघाउने समझदारी गरेका छौँ,’ अध्यक्ष शाहीले भने, ‘हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आइपरे वा कतै बास बस्नु परे हामीले लुक्ला, अन्नपुर्ण लगायतका क्षेत्रमा कोरियाली पर्यटकहरुका लागि सेल्टर तोकेका छौँ ।’
एशोशिएसनले देशभरका पर्यटकीय स्थलमा गाइड बिना एक्लै हिडेर अप्ठ्यारो अवस्था खेप्न सक्ने कोरियाली पर्यटकहरुका लागि विभिन्न होटलहरुलाई सेल्टर तोक्ने काम गर्ने छ ।
यसैबीच नेपालका विभिन्न पर्यटकीय रुटमा कोरियन खानाहरुको मेनु पनि विस्तार गर्न एशोशिएसनले सघाउने भएको छ ।
त्यसैगरी पछिल्लोपटक कोरियामा रहेका नेपालीहरुका आफन्त भेटघाटका लागि दुतावासले सघाउने भएको छ । एशोशिएसनमार्फत् दूतावासले टुर प्याकेज बनाई कोरियामा रहेका नेपाली कामदारका आफन्तलाई पठाउन सघाउने छ ।
प्रकाशित : श्रावण २४, २०७५ १८:३८
मुगुको खत्याड भेगका अधिकांश महिला महिनावारी र सुत्केरी भएका बेला गोठमा सुत्नुपर्ने बाध्यता छ
श्रावण २४, २०७५ राजबहादुर शाही
मुगु — गोठमा सुत्दा खत्याड गाउँपालिकाको रिघा गाउँका स्थानीयमा मलेरिया संक्रमण बढेको पाइएको छ । गोठमा लामखुट्टेले बढी टोक्ने र त्यसले मलेरिया फैलिएको चिकित्सकले बताए ।
झुल नलगाएर गोठमा सुत्दा मलेरियाको जोखिम बढेको रोग नियन्त्रण महाशाखाका विशेषज्ञ डा. मदन कोइरालाले बताए ।
उनका अनुसार गाउँका महिला सुत्केरी र महिनावारी हुँदा गोठमा सुत्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘गोठमा गाईभैंसीको गन्ध र फोहोरका कारण लामखुट्टे बढी लाग्छन्, त्यही नजिकै सुतेका महिलालाई लामखुट्टेले टोक्ने नै भयो,’ उनले भने, ‘महिनावारी र सुत्केरी भएका बेला रोगसँग लड्ने क्षमता कम हुँदा थप जोखिम भएको पाइयो ।’
गर्मी छल्न कतिपयले सिरकसमेत नओढ्ने गरेकाले लामखुट्टेले बढी टोकेको चिकित्सकको भनाइ छ । मलेरियाको अनुसन्धानका लागि कोइराला बाजुरा हुँदै रिघा गाउँ आएका थिए । उनले अधिकांश महिला महिनावारी भएका बेला गोठमा सुत्ने गरेको भेट्टाए । त्यस्तो अवस्थामा पाँच दिनसम्म गोठमा सुत्ने गरेका छन् ।
गाई–गोरुलाई टोक्ने ‘एनोफिलिक’ नामक लामखुट्टेले रोग सारेको उनले बताए । अनुसन्धानका क्रममा रिघा गाउँमा एनोफिलिजम्याकुलेटस, एनोफिलिजएनुलाटिज र एनोफिलिक क्युम्याटिलिज जातको लामखुट्टे भेटिएका छन् ।
गाउँमा पुरुषभन्दा महिलामा औलो रोग बढी भेटिएको थियो । महिनावारी र सुत्केरी महिलालाई घरमा राख्दा देवीदेवता रिसाउने गलत मान्यताका कारण यहाँका महिला गोठमा बस्न बाध्य छन् ।
मलेरिया नियन्त्रणमा गोठ मुख्य बाधक बनेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका औलो रोग फोकलपर्सन बलिबहादुर बुढाले बताए । महिनावारी र सुत्केरी भएका महिलालाई गोठमै बसे पनि झुलको व्यवस्था गर्न थालिएको उनको भनाइ छ ।
खत्याड गाउँपालिकाको–७, ८ र ९ मा फैलिएको औलो रोग नियन्त्रणमा कठिनाइ भएको छ । औषधि सेवनले बिरामीको संख्या घटदै जानुपर्नेमा झन् वृद्धि भएको स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ । यो वर्ष ९२ जनामा औलो देखिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार असारमा ४८ र साउनमा ४४ बिरामी भेटिएका थिए । साउनमा ३८ बाट घटेर २४ पुगेका थिए । तर फेरि ४४ जनामा रोग देखिएको थियो ।
महाशाखाका औलो रोग विशेषज्ञ उत्तमराज प्याकुरेलका अनुसार एक साता बिरामीको संख्या घट्ने र अर्को साता फेरि बढ्ने समस्या देखिएको छ । रोग नियन्त्रण गर्न अझै समय लाग्ने प्याकुरेलको भनाइ छ ।
बिरामीको संख्या फेरि बढेपछि रोग नियन्त्रण महाशाखाबाट डा. मदन कोइरालासहितको टोली रिघा पुगेको छ । यसअघि पनि दुई सातासम्म विशेषज्ञ छोलीले घरदैलो गरी बिरामीको उपचार गरेको थियो । विशेषज्ञ टोली त्यहाँ बस्दा रोग नियन्त्रणमा आएको थियो ।
स्थानीयवासीलाई रोगबाट बचाउन झुल वितरण गरेर टोली फर्किएको थियो । औलोले महिला, बालबालिका र वृद्ध बढी प्रभावित छन् । बुधबार दुई बालिकामा रोगको संक्रमण भेटिएको छ ।
४ वर्षीया गोमा सन्ज्याल र १४ वर्षकी पुस्तिका रोकायामा औलोको संक्रमण भेटिएको चिकित्सकले जनाए । रिघा गाउँको औलोले आसपासका गाउँमा समेत त्रास फैलिएको स्थानीय धनबहादुर रोकायाले बताए ।
बिरामीले डोज नपुर्‍याएर औषधि सेवन गरेकाले रोग फैलिएको बुढाको भनाइ छ । क्लोरोक्विइन नामक औषधि दुई/तीन दिनसम्म खाने र त्यसपछि छोड्ने गरेको उनले जनाए ।
लगातार १४ दिनसम्म औषधि सेवन गरेपछि मात्र कीटाणु नष्ट हुन्छ । दैनिक दुईजना स्वास्थ्यकर्मीको टोली रिघा गाउँमा पुर्‍याएर बिरामी जाँच गर्ने र औषधि सेवनको अनुगमन गर्ने गरिएको जिल्ला स्वास्थ्यले जनाएको छ ।
प्रकाशित : श्रावण २४, २०७५ १८:१३